I-Flat Dona Maria Fuengirola 5 imiz ibhishi nesikhungo - I-Airbnb
I-Flat Dona Maria Fuengirola 5 imiz ibhishi nesikhungo
Fuengirola, Andalucía, i-Spain
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Veronique
U-Veronique Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elihle, elithulile nelinethezekile elingu-55 mvele, elilungiswe ngokuphelele, elinamakamelo okulala angu-2, ithala elingu-8 miliyoni, esitezi sokuqala sesakhiwo esinezitezi ezingu-5 esinamafulethi angu-15 esewonke, omakhelwane abanokuthula okukhulu, ne-elevator, endaweni enhle yedolobha lase-Fuengirola, imizuzu engu-5 yokuhamba ukusuka e-promenade, amabhishi, i-Plaza de la Constitución, izindawo ezinhle kakhulu ze-tapas, izindawo zokudlela, izitolo kanye nezindawo ezithandwa kakhulu e-Fuengirola. Ilungele imindeni enezingane nezincane nezidala ngokufanayo.
Woza futhi ujabulele ifulethi lethu elihle, elithulile nelinethezekile elingu-55 mylvania, elilungiswe ngokuphelele, elinamakamelo okulala amabili amakhulu kanye no-8 m I-Make of terrace, esitezi sokuqala sesakhiwo sezitezi ezingu-5 esinamakhaya angu-15 esewonke, omakhelwane abathule kakhulu, abanekheshi, endaweni engcono kakhulu yedolobha lase-Fuengirola, amamitha angu-400 ukusuka e- promenade, amabhishi, i-Plaza de la Constitución, izindawo ezinhle kakhulu zama-tapas, izindawo zokudlela, izindawo zokuthenga kanye nezindawo ezinhle kakhulu zase-Fuengirola.
Ifulethi lethu lilungele imindeni enezingane namaqembu abantu abasebasha. Singemizuzu engu-5 ukusuka e-Bioparc edumile, amapaki amanzi nezinkundla zokudlala. Kubantu abasebasha kunezinhlobonhlobo zama-pub, ama-disco nama-bar omculo aseduze.
Mina, Véronique, ngingumnikazi wendlu, ngihlala e-Málaga futhi ngizohlala ngikhona ukuze ngikusize nganoma yini.
Umgwaqo wethu uCamino de Coín unendawo yokupaka eluhlaza okwesibhakabhaka (ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kusuka ngo-09: 30h kuya ku-14: 00h futhi kusuka ngo-16: 30h kuya ku-21: 00h; Imigqibelo kusuka ngo-09: 30h kuya ku-14: 00h; AmaSonto namaholide angenayo isevisi). Ukuze ukhokhe ungadawuniloda i-app ye-Telpark. Ukupaka okumhlophe kwamahhala nakho kuyatholakala emigwaqweni eseduze, kodwa akulula ngaso sonke isikhathi ukuthola indawo, ikakhulukazi ehlobo. Amamitha angu-300 ukusuka efulethini lethu yipaki likamasipala we-Plaza de España (24h, ubuningi 15€/usuku).
Ifulethi lethu lisesitezi sokuqala. Kukhona ithawula. Sekukonke kunamafulethi angu-15 phansi okungu-5. Bonke bangomakhelwane abanokuthula. Kukhona i-patio yangaphandle evamile endaweni yokungena endlini.
Lapho ungena endlini, ungena endaweni evulekile engu-26 mylvania ngekhishi elivulekile elinefasitela eliya egcekeni lokungena, ibha encane enezihlalo ezimbili eziphakeme, itafula lokudlela elinezihlalo ezingu-6, ikhabethe lezitsha zetafula, negumbi lokuphumula elinosofa omkhulu ongu-3 (ophinde ube umbhede wesofa ongu-140 x 200 cm), itafula lokuphumula, itafula elinomabonakude, i-PlayStation (futhi ye-dvd), imidlalo yebhodi, i-air conditioning kanye nokushisisa.
Kusuka egumbini lokuphumula kukhona ukufinyelela endaweni eyakhiwe ngamatshe engu-8 ebheke emgwaqweni, ehlanganisa ububanzi begumbi lokuphumula nekamelo lokulala eliyinhloko, elinetafula nezihlalo ezingu-2, ibhayisikili elisebenza ngokukhululekile kanye nomzila wezingubo. Ikamelo lokuphumula lingamnyama ngokuphelele.
Indlu ine-Wifi esheshayo yekhwalithi (ftrl optic) futhi kukhona ikhebula lokuxhuma i-laptop yakho, ithebhulethi noma iselula ku-TV futhi ujabulele i-TV yakho yokukhokha. Kusukela ngo-April 2018 izakhamuzi zase-Europe zingakwazi ukufinyelela okuqukethwe kwazo okukhokhelwayo kusuka ezinkundleni zokustrima ezifana ne-Netflix, i-Amazon Prime, i-iPlayer noma i-Spotify ngaphandle kwezindleko ezengeziwe lapho zihambela kwelinye izwe lase-EU. Okudingeka ukwenze nje ukuletha ama-app kudivayisi yakho efinyeleleka kalula.
Ikhishi libheke igceke lokungena lendlu. Kusha ngokuphelele futhi kuhlomele zonke izesekeli: ifriji, umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, umshini wokuwasha, i-ceramic hob, i-smoor yesimoko, uhhavini kagesi, iketela lamanzi kagesi, i-toaster, umshini wokwenza ikhofi, amapuleti, izinto zokudlela, izinkomishi, izingilazi, amabhodwe, ipani lokuthosa, izitsha zikahhavini, i-ayina nebhodi loku-ayina, njll.
Sinikeza imikhiqizo eyisisekelo efana nosawoti, ushukela, uwoyela, uviniga, ikhofi, itiye, iphepha lasekhishini, ibhodlela lamanzi (nakuba amanzi empompi e-Fuengirola engadakwa ngokuphelele), amathawula asekhishini, imikhiqizo yokuhlanza kanye nensipho yomshini wokuwasha kanye nomshini wokuwasha izitsha.
Amakamelo okulala amabili anendawo evulekile. Ikamelo lokulala eliyinhloko elingu-16 mű libheke ithala, elihlanganyela igumbi lokuphumula, kanye nomgwaqo. Ineminyango yengilazi eya ku-terrace, umnyango ophindwe kabili oya egumbini lokuphumula kanye nomnyango oya ehholo nendawo yokungena egumbini lokugezela. Inombhede omkhulu ontofontofo ophindwe kabili ongu-160 x 200 cm, amatafula aseduze kombhede, ikhabethe kanye netafula nesihlalo ukuze usebenze ngekhompyutha. Kunikezwa isethi yelineni yombhede ehlanzekile (ishidi lombhede elifakiwe, isembozo se-duvet esiphindwe kabili, izembozo zemicamelo), ubusika kanye ne-duvet kabili yasehlobo.
Ikamelo lesibili le-17 mylvania lilungele izingane ezingu-3, kodwa futhi lilungele abantu abadala. Inemibhede emibili elala umuntu oyedwa (i-nest bed) engu-90 x 190 cm, umbhede ophakeme ongu-90 x 180 cm, ibhokisi lama-drawer, ibha enamahenga ezingubo kanye netafula lezingane elinezihlalo ezingu-2 lapho zizothanda ukudlala khona. Sinemidlalo yebhodi. Kunikezwa isethi yelineni yombhede ehlanzekile (amashidi afakiwe, izembozo zeduvethi zomuntu ngamunye, izembozo zemicamelo), ubusika ngabanye nama-duvets asehlobo.
Indlu yokugezela itholakala phakathi kwamakamelo amabili. Inethileyi elikhulu le-shower elingu-120 x 70 cm nekholomu yeshawa enamakhabethe aqondile, i-toilet dispor, i-wc, i-drawer enkulu, umshini wokomisa izinwele, iphepha lasendlini yangasese, umshini wokukhipha iphepha lesandla, insipho yezandla, i-shampoo ne-bath gel kanye nekhithi yosizo lokuqala. Isethi eyodwa yamathawula ezandla nokugeza anikezwa umuntu ngamunye, kanye nethawula elilodwa lasebhishi umuntu ngamunye.
Ifulethi line-air conditioning kanye nohlelo oluphakathi lokushisisa ngokusebenzisa ama-ducts, elinokuphuma kuwo wonke amakamelo.
Ifulethi lethu litholakala ezinyathelweni ezimbili ukusuka ehholo ledolobha, endaweni enhle yedolobha lase-Fuengirola, eduze kakhulu ne-Plaza de la Constitución kanye neSonto layo le-Rosary, indawo enesimanje kodwa isagcina imigwaqo yayo ejwayelekile nezindlu zendabuko. Ngaphambi kwendlu kunesitolo se-gourmet futhi amamitha ambalwa kude nesitolo sezinto ezibhakiwe, isitolo esikhulu se-Día, isitolo esikhulu sase-China, isitolo sezithelo, isitolo sezinkukhu esishisayo, isitolo se-Churros, i-hairdresser nezinye izitolo ezincane ezizungeze amadolobha amakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, sihamba imizuzu engu-5 kuphela ukusuka ezindaweni ezithandwayo zase-Fuengirola: i-promenade, ibhishi, i-Bioparc edumile, amapaki amanzi, i-Chinorros Square, i-Marina, izitolo, ama-bar, ama-tapas, izindawo zokudlela (bheka uhlu oluphelele kakhudlwana engxenyeni yomakhelwane).
I-Fuengirola inamakhilomitha angu-8 wogu olune- promenade enhle yamakhilomitha angu-6 namabhishi amahle. Inesiko elide lezivakashi kanye nenani elikhulu lezindawo zokudlela nezinketho zemisebenzi nokuzijabulisa.
Uma ungidinga, ungangishayela ucingo noma ungibhalele noma nini. Ngikhuluma isiFulentshi, iSpanishi nesiNgisi.
Imvelaphi ye-Fuengirola ibuyela emuva emiphakathini yase-Mediterranean enjengama-Phoenicians nama-feet, abahlala emathafeni egquma lapho namuhla kunenqaba yama-Arabhu yase-Sohail. Idolobha linamakhilomitha angu-8 wogu elinendawo enhle engamakhilomitha angu-6 kanye namabhishi amahle. I-Fuengirola inesiko elide lezivakashi, inqwaba yezindawo zokudlela nezokuzijabulisa ongakhetha kuzo nemisebenzi.
Ifulethi lethu, elilungiswe ngokuphelele, litholakala ezinyathelweni ezimbili ukusuka ehholo ledolobha, endaweni enhle yedolobha lase-Fuengirola, eduze kakhulu ne-Plaza de la Constitución Square kanye ne-Iglesia del Rosario Church yayo, indawo enesimanje esagcina imigwaqo yayo ejwayelekile nezindlu zendabuko. Umgwaqo wethu, i-Camino de Coín, 9, unezindawo zokuhamba zezimoto kanye nezindawo zokupaka eziluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa njengoba zingekho izindawo zokuphuzela utshwala noma izindawo zokudlela ezivuliwe kuze kube sekupheleni kwesikhathi, kuthule kancane.
Ngaphambi kwendlu kunesitolo se-gourmet futhi amamitha ambalwa kude nesitolo sezinto ezibhakiwe, isitolo esikhulu se-Día, isitolo esikhulu sase-China, isitolo sezithelo, isitolo sezinkukhu esishisayo, isitolo se-Churros, isitolo sezinwele nezinye izitolo ezincane ezingomakhelwane.
Ifulethi lethu liseduze kakhulu nezindawo ezithandwa kakhulu zase-Fuengirola:
-	Paseo Marítimo (Promenade) Rey de España and beach 5 minutes walk.
- I-Bioparc Fuengirola, i-zoo enezilwane nezinyoni ezindaweni ezilingisa indawo yazo yemvelo, ukuzijabulisa ehlathini nenkundla yokudlala yezingane. Ukuhambahamba imizuzu engu-3.
-	I-Plaza de la Constitución Square ne-Rosario Church, izitolo zemfashini nokuhlobisa, izindawo zokudlela, ama-bar, ama-tapas, ukuhambahamba imizuzu engu-3.
-	I-Port of Fuengirola, enezindawo zokudlela, amathala, izikebhe zokubona amahlengethwa, imidlalo yasemanzini, ukutshuza emanzini, ukudoba kwezemidlalo, ikilabhu yasemanzini, ukuhamba ngomkhumbi, ukuhamba ngemizuzu engu-10.
-	I-Plaza Chinorros square, indawo enhle kakhulu ye-tapas e-Fuengirola, ukuhamba imizuzu engu-5.
-	I-La Galeria Gastromercado, izindawo zokudla eziyishumi ezinezinto ezikhethekile zikazwelonke nezomhlaba wonke zokupheka, ukuhambahamba imizuzu engu-5.
-	Ukuthenga e-Parque Miramar (izitolo, ama-bar, ama-cinemas aphindaphindiwe, futhi inguqulo yasekuqaleni) ukuhambahamba imizuzu engu-20.
-	Isigodlo sase-Arabia se-Sohail, esinamakhonsathi, imikhosi nemakethe yakudala ehlobo, imizuzu engu-7 ngemoto, imizuzu engu-30 yokuhamba ngezinyawo.
- I-Sould Park, ipaki lamanzi nepaki lokuzijabulisa ngemizuzu engu-15 uma uhamba ngezinyawo.
-	I-Costa Water Park, ipaki lamanzi, ukuhambahamba imizuzu engu-11.
- I-Aquamijas, ipaki lamanzi, ukuhamba imizuzu engu-9.
-	I-Poniente Park, ipaki lezingane elijabulisayo elinesikebhe se-pirate, ukuhamba imizuzu engu-15.
- I-Fluvial Park (ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikili, ezemidlalo, imidlalo), imizuzu engu-15 yokuhamba ngezinyawo.
-	I-Carousel, ukujabulela izingane, ukuhambahamba imizuzu engu-14.
-	I-Parque del Sol, ipaki lasedolobheni elinenkundla yokudlala yezingane, ukuhambahamba imizuzu engu-2.
-	I-Fuengirola Flea Market (imakethe engcono kakhulu e-Andalusia, ngoMgqibelo), ukuhambahamba imizuzu engu-17.
- I-Fuengirola Sunday Market (isikhumba, izicathulo, imisebenzi yezandla, amatshe ayigugu okuhloba, izikhwama zezandla, ubumba, izipho, izindwangu), ukuhambahamba imizuzu engu-12.
-	Imakethe yangoLwesibili (izindwangu, izicathulo, izimbali nezitshalo, izithelo, imisebenzi yezandla, njll.) ezindaweni ezifanele, ukuhamba imizuzu engu-15.
-	I-Central Market Mercacentro (ukudla), ukuhamba imizuzu engu-7.
-	I-Yacimiento Romano (isayithi yamaRoma) Park - Finca del Secretario, imizuzu engu-7 ngemoto, imizuzu engu-30 uhamba ngezinyawo.
-	I-Los Boliches: enye indawo yase-Fuengirola enamabhishi amahle kanye ne- promenade, isimo somndeni, ama-bar amaningi nezindawo zokudlela, ukuhambahamba imizuzu engu-20.
- Umkhosi Womhlaba Wonke Wezinkanyezi e-Marbella, imizuzu engu-30 ngemoto
-	Kunezinkundla zokudlala igalofu ezingu-6 18 phakathi nemizuzu engu-10 uhamba ngemoto ukusuka endlini.
Siyakwamukela ekhaya lami e-Fuengirola! Ngingu-Véronique, isihambi esingenasiphazamiso! Lapho ngihamba, omunye wabangane bami uzohlangana nawe endlini yami futhi uzoba kuwe nganoma yini ongayidinga phakathi nokuhlala kwakho futhi akunike ukusikisela kwezindawo zokudlela ezithakazelisayo, izindawo nohambo. Sikhuluma iSpanishi, isiNgisi nesiFulentshi.
Siyakwamukela ekhaya lami e-Fuengirola! Ngingu-Véronique, isihambi esingenasiphazamiso! Lapho ngihamba, omunye wabangane bami uzohlangana nawe endlini yami futhi uzoba kuwe nganoma…
UVeronique Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: VFT/MA/28823
Hlola ezinye izinketho ezise- Fuengirola namaphethelo